MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA SILKY TERRIER - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha Silky Terrier
Phoebe the Silky Terrier oo 2 jir ah
Liiska eeyaha Silk Terrier Mix Breed
Magacyada Kale ee Taranka Silky Terrier
Silky Terrier, sidoo kale loo yaqaan Sydney Terrier, waa eey yar, ganaax leh, eey dhexdhexaad dhexdhexaad ah. Jidhku wuu inyar ka dheer yahay, oo leh dusha sare. Madaxa qaab-goobeedku wuu siman yahay inta u dhaxeysa dhegaha, dhex-dhexaad dhexdhexaad ah, iyadoo dhakada ay waxyar ka dheer tahay xuubka. Joogsiga ayaa ah mid gacmeed oo sankuna waa madowyahay. Ilkaha waxay ku kulmaan qaniinyada maqaska. Indhaha yar-yar, ee u eg yicibta ayaa ah midab madow oo leh cirifka indhaha ee mugdiga ah. Dhagaha oo kacsan, qaabeeya V waa yar yihiin oo madaxa sare ayey saaraan. Lugaha hore waxay ku toosan yihiin cagaha yar yar oo u eg bisadaha. Dabada-sare ayaa si caadiya loogu xidhay. Fiiro gaar ah: dabo istaaggu waa sharci darro inta badan Yurub. Mararka qaarkood waxaa la saaraa goynta. Dharka dhaadheer, silky, dhererkiisu waa 5-6 inji (12-15 cm) oo dherer ah wuxuuna ku yimaadaa midab buluug ah oo leh calaamado buluug ah ama midab casaan ah. Timaha ayaa loo qeybiyaa bartamaha dhabarka. Waxay leedahay dusha sare ee loo yaqaan 'topknot' oo ay tahay in uu ka khafiifsan yahay dhibcaha tan ama tan cas. Silky Terriers waxay ku dhasheen madow. Koodhku wuxuu aad ugu nugul yahay dhaldhalaalka iyo dermaha haddii aan si joogto ah loo qurxin
Terrier-kan jacaylka badan, waa mid caqli badan, geesi ah oo feejigan. Kalgacayl, xamaasad, farxad iyo is dhexgal, waxay jeceshahay inay ku dhawaato sayidkeeda. Waxay ka buuxdaa tamar waxayna u baahan tahay jimicsi fiican si ay u degto. Xiiso badan oo xiiso leh, waa qodayaal xamaasad badan. Firfircoon, caqli badan oo dhaqso badan. In kasta oo ay le'eg tahay, eeygan docile wuxuu sameeyaa waardiye wanaagsan. Tani waa nooc adag oo si fiican u hagaajiya safarka. Guud ahaan aamin laguma aha kuwa kale xayawaanka aan xayawaanka ahayn sida bakaylaha , hamster iyo doofaarka guinea . Bulsho si fiican, oo ay ku jiraan la bisadaha, markaa iyaga ma eryanayso. Wanaagsan carruurta illaa iyo inta eeygu uusan lahayn milkiile jilicsan oo ku guuldareysta inuu siiyo asluubta iyo qaab-dhismeedka dhammaan eeyaha si dabiici ah ugu baahan. Tababar eeyahaani waa kuwo toos ah maxaa yeelay waxay aad ugu hamuun qabaan inay wax bartaan. Ha u oggolaan in eeygan yar uu horumariyo Cudurka Dog yar , aadanaha kiciyay dabeecadaha halka eygu aamminsan yahay inuu joogo hogaamiyaha xirmada aadanaha. Marka Silky rumeysan yahay inuu yahay madaxa, dabeecaddiisa ayaa is beddeleysa, iyadoo isku dayaysa inay xakameyso qof walba iyo wax kasta oo ku xeeran. Waxay noqon kartaa mid dalbata, badheedh ah, ilaalin ah oo laga yaabo inuu bilaabo inuu ciyo badan. Waxay bilaabi kartaa inay noqoto mid aan lagu aamini karin carruurta iyo mararka qaarkood dadka waaweyn, oo noqda mid sibiq ah u dhaqaaqa haddii la fooraro oo laga yaabo inay dagaal la galaan eeyaha kale.
Dhererka: 9 - 10 inji (23 - 25 cm)
Dumarku guud ahaan way ka yar yihiin ragga.
Miisaanka: 8 - 11 rodol (4 - 5 kg)
Guud ahaan caafimaad. Waxyaabaha yar yar ee laga walwalo waa cudur ku dhaca maqaarka 'intervertebral disc disease', xusulka dysplasia, luxel patellar iyo Legg-Perthes. Noocani marmarka qaarkood waxaa ku dhaca sonkorow, suuxdin iyo burburka wadnaha.
Pit bull iyo isku dhafka bulldog
Silky Terrier wuxuu ku fiican yahay nolosha guryaha. Eeyahaani waa kuwo firfircoon oo gudaha ku jira waxayna ku fiicnaan doonaan daarad la'aan haddii ay jimicsi ku filan sameeyaan.
Silky Terrier-ka waxaa ka buuxa tamar wuxuuna u baahan yahay inuu socdo maalin kasta socdo . Waxay leedahay adkeysi la yaab leh waxayna ku raaxeysan doontaa fursado joogto ah oo lagu ordo laguna ciyaaro.
Qiyaastii 3-6 eyyo
Silky Terrier-ku wuxuu aad ugu nugul yahay dhaldhalaalka iyo dermaha wuxuuna u baahan yahay shanlo maalinle ah iyo cadayasho. Waa in si joogto ah loo maydhaa si timaha ugu jiraan xaalad sare. Waxay ku qaadataa wax ballanqaad ah milkiilaheeda, oo u baahan qiyaastii 15 daqiiqo maalintii. Maydhashada ka dib, hubi in eeygu si fiican u qalalan yahay oo diiran yahay. Koodhka waa in marmar la jarjaro, timaha lugaha ka soo jeeda jilbaha hoos ayaa inta badan la jarjaraa. Timaha ka soo dhaca indhaha waxay ku xidhan yihiin dusha sare sidaa darteed eey wuxuu awood u yeelan doonaa inuu si fudud wax u arko. Silky Terrier wuxuu daadiyaa wax yar timo la'aan badanaana waa eey u fiican kuwa leh xasaasiyad .
Silky Terrier-ka waxaa la abuuray dhammaadkii 1800-meeyadii iyada oo laga tallaabayo Yorkshire Terrier leh Terrier-ka Australia . Ujeeddadu waxay ahayd in la wanaajiyo midabka jaakadda midabbada buluug iyo tan-midabka leh ee Australia. Terrier-ka Australia iyo Silky Terrier-ka waxay ahaayeen isku ekaad sannado badan ilaa markii dambe loo aqoonsaday inay yihiin laba nooc oo kala duwan oo loo kala saaray laba nooc oo kala duwan. Intii lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka, adeegeyaal Mareykan ah ayaa qaar ka mid ah kuwan Silky Terriers la yimid gurigooda. Noocani waxaa aqoonsaday AKC sanadkii 1959 waxaana heerkiisa la aasaasay 1962 ka dibna la cusboonaysiiyay 1967. Silky Terrier-ka waligiis wuxuu ahaa eey wehel ah, laakiin eeygan yar ee xawaaraha badan wuxuu aad ugu fiican yahay soo qabashada jiirka.
iskudhaf weyn oo loo yaqaan 'pyrenees norwegian elkhound mix'
Gacaliso yaroo Silky yar ayaa lagu magacaabaa Ch. Amron's Bis Bearlou (LuLu), Milkiilaha / Kalkaaliyaha / Gacaliyaha: Norma Baugh, Amron Silky Terriers
'Kani waa Louie, oo ah Silky Terrier jira 2 1/2 sano. Louie waxaa la badbaadiyey Febraayo 2009. Milkiilayaashiisii ​​hore waa isu dhiibeen maxaa yeelay wuu 'weynaa'. Louie wuxuu culeyskiisu gaarayaa 11 rodol. (sawirka) Dabeecaddiisu waa mid fantastik ah-wax kasta oo aad ka filan lahayd qof da 'yar, caafimaad qaba, caqli badan, adeecsan, oo silloon oo caajis ah inuu noqdo. Xaaskeyga iyo aniga labadeena waxaan nahay taageerayaal waa weyn Cesar Millan, oo si joogto ah ayaan u daawanaa showgiisa. Waxaan sidoo kale aqriyay inbadan oo macluumaadkiisa ah oo lagu dhajiyay shabakada. Waxaan qaaday sawirkan intii lagu guda jiray kulan ciyaar. Louie uma muuqan karto inay hesho waqti ku filan oo dibadda ah. Macluumaadka tababarka ee aan ka bartay Cesar ayaa si weyn u caawiyay. Waxaan nahay milkiileyaal gabdhaha Yorkie ah muddo 18 sano ah, oo waxaan ula dhaqmi jirnay sida carruurta oo kale. Maaha fikrad fiican. Markii aan qaadanay Louie, waxaan bilaabay inaan raaco talada Cesar ee “Hogaamiyaha Xirmada”. Maxay ku kala duwan yihiin. Ma ahan ooy weyn oo kaliya ee wuxuu buuxiyey godka weyn ee qalbiyadeena ku reebay Yorkies ee naga lumay. '
'Tani waa Bella. Waxay jirtaa 1 sano iyo 5 bilood sawirkaan. Iyadu waa qof jecel oo caqli badan ... laakiin aad u madax adag! Iyadu waa Silky Terrier waxayna u maleyneysaa inay eey weyn tahay .... waan jeclahay! '
'Isbarashada Ms. Phoebe, waa 2 jir Silky degan Selangor, Malaysia. Phoebe waxay la nooshahay 2 bisadood, Ameerikaan isku dhafan oo Beershiya ah, Wiilka Dahabka ah iyo bisad maxalli ah, Sirius Black. Phoebe waxay jeceshahay inay la ciyaarto bisadaha oo ay la seexato. Phoebe iyo bisadaha runtii waa jecel yihiin milkiilahooda, oo hadda ku sii wadanaya waxbarashadeeda Pet Grooming. '
Kani waa Duke oo wuxuu leeyahay, 'Ilaah ha barakeeyo Ameerika.'
isku darka eeyaha ey shaybaarka jaallaha ah
Kukiyada Lee eey yar oo 3 bilood jir ah oo miisaankeedu yahay 3 ½ rodol (1.5 kg).
Cooper 4 jirka Silky Terrier
Ozzie oo ah 4 jir Silky Terrier
Eeg tusaalooyin badan oo ka mid ah Silky Terrier
Sawirada Silky Terrier 1
Eeyda Terky Silky: Sawirada Guryaha La Uruurin Karo
timo dhaadheer oo madow iyo cadaan leh
4 bilood jir dane ah
5 bil Boston Pit
jack russell iyo qas cairn terrier mix
shaybaar cadaan ah oo isku dhaf ah
min pin weiner isku darka eyga